WARBIXIN CUSUB: Dawladda Imaaraatka Carabta oo gabi ahaanba joojisay Mashaariicdii horumarineed ee ay ka waday Soomaaliya, si adagna u cadeysay arrimo qarsoon. – Puntlandtimes
WARBIXIN CUSUB: Dawladda Imaaraatka Carabta oo gabi ahaanba joojisay Mashaariicdii horumarineed ee ay ka waday Soomaaliya, si adagna u cadeysay arrimo qarsoon.
DUBIA(P-TIMES)- Warar hoose oo laga helayo Safaaradda Imaaraatka Carabta ee kutaala magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ay dawladda Imaaraatku gabi ahaanba joojisay mashaariicdii horumarineed ee ay ka waday gudaha dalka, gaar ahaana isbitaalo, Sadex xarumo ciidan oo tababaro lagu siinayay ciidamada Xooga dalka Soomaaliyeed & Barnaamij guud oo la xariiray dibu dhiska Soomaaliya oo ka soo kabanaysa dagaalo Sokeeye.
Sidda ay daabacday Shabakada GULNEWS waxaa si rasmi ah ay dawladda Imaaraatku u go’aansatay in ay joojiyaan mashruuca Tababarada ciidamada Xooga dalka Soomaaliyeed, kaas oo bilowday sannadkii 2014-kii, waxaana ay sheegeen in ay u joojiyeen sababo la xariira cilaaqaadka labada dal oo xumaaday.
Imaaraatku waxay aad uga caroodeen talaabadii lagu baaray diyaarad lacag waday oo ka dagtay garoonka Muqdisho, lacagtaas oo ahayd Sahayda ciidamada lagu tababaro saldhiga caasumada iyo arrimaha Isbitaalo ay gacanta ku hayso.
Xukuumada Abu Dhabi waxay sheegtay in ay gacanta ku haysay 2407 Askari oo kusugnaa sadex saldhig tababar oo kuyaalay gudaha Soomaaliya, waxayna tababarada ka sokow siisaa agabyada ciidan iyo dhaqaale ee ay u baahnaayeen, taas oo ka dhigaysa xaalad kale oo jahawareer dhaqaale-keeni karta.
Imaaraatka ayaa sheegay in ay dhiseen Isbitaalo dib u dhis lagu sameeyey, sidaas oo kale ay qeyb ka noqdaan mashaariicda gargaar bixinta ee Soomaaliya, si dalka looga saaro marxaladdii adkeyd ee uu ku jiray sannadyadii lasoo dhaafay, balse ay wax kasta haleysay dawladda Faderaalka ee dalku.
Warbixinta waxaa lagu xusay in ay Imaaraatka Carabtu wali kormeerayaan dhismaha iyo awooda ciidamada Bileyska Badda ee Puntland, si loogala shaqeeyo in ay hantaan ammaanka lana dagaalamaan kuwa ka soo horjeeda ammaanka gobalka.
Talaabada ay qaaday dawladda Imaaraatka Carabta ayaa la rumeysan yahay in ay hordhac u tahay jawaab adag oo ka imaanaysa ABU DHABI oo la xariirta talaabadii ay qaaday Xukuumada Faderaaliga ah ee Soomaaliya, taas oo qabatay diyaarad lacag waday, ka dibna lagu eedeeyey in ay u dhaqantay si ka baxsan diblumaasiyada caalamiga ah, markii gabi ahaanba la baaray agabyadii muhiimka ahaa, ka dibna loo dhaadhiciyey Bangiga Dhexe ee Soomaaliya.
Dawladda Faderaalka Soomaaliya ayaa xariir xun kala dhaxeeyaa Imaaraatka Carabta, shaki ma saarna in dhaawaca siyaasadeed ee dhexmaray labada dhinac uu saameyn guud ku yeelan doono dalka oo dhan haddana howlgalada Imaaraatka Carabta ayaysan ka fakarin dawladda Faderalku cidda u buuxin karta, waqti ay gacanta ku hayaan waxyaabo badan oo muhiim ah.